नेपालीमा मुटुरोग सम्बन्धि ज्ञानको कमी छ- विकलचन्द्र आचार्य | We Nepali
२०७४ असोज १२ गते ९:५२
प्रत्येक वर्ष २९ सेप्टेम्बरलाई संसारभर विश्व मुटु दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यस दिवसको मुख्य सन्देश मुटुरोग सम्बन्धि चेतना फैलाई यसबाट बच्न तथा सावधानी हुन उत्प्रेरित गर्नु हो ।
सानै उमेरमा छात्रवृत्ति पाएर बेलायत आएका अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यलाई चौतीस वर्षकै कलिलो उमेरमा अकष्मात ह्दयाघात भयो । ह्दयाघात भएपछि उनको जीवनले अर्को मोड लिएको छ । आफूलाई लागेको रोगबारे अध्ययन गरि यसबाट अरुलाई सावधान गराउन आचार्यले मुटुरोग सम्बन्धि दुईवटा पुस्तक लेखे । आफूले भोग्नुपरेको मुटुरोग समस्या अरुलाई नपरोस् भनेर यस सम्बन्धि चेतना फैलाउन लेखेर होस् वा भेटेर उनी रातदिन सक्रिय छन् । उनमा मुटुरोगलाई सामान्य मानिसले बुझ्ने गरि ब्याख्या गर्ने कला छ । ब्रिटिस मेडिकल जर्नालिस्ट असोसिएसनका सदस्य तथा कोरोनरी मुटुरोग पुस्तकका लेखक आचार्यसंग नवीन पोखरेलले मुटु दिवसको सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको अंश यहां प्रस्तुत छ ः
बढ्दो महत्वकांक्षा, कम क्रियाशील जीवन, स्वास्थ्य सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञानको कमी तथा चिन्तालाई समयमा ब्यवस्थित गर्न नसक्नु जस्ता मुख्य कारणले संसारमा मुटुरोगबाट मानिसहरु पीडित हुने क्रम बढ्दो छ । बेलायतको कुरा गर्ने हो भने कोरोनरी मुटुरोग र स्ट्रोक सबैभन्दा धेरै मानिस मर्ने रोग हुन् ।
अध्ययनले दक्षिण एसिया र अफ्रो क्यारिबियनका मानिसलाई कोरोनरी मुटुरोग लाग्ने सम्भावना अन्यत्रकालाई भन्दा धेरै बढि हुने देखाएको छ । यसमा बंशानुगत तथा जीवनशैलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बढ्दो शहरीकरण र अस्वथ्यकर जीवनशैलीले गर्दा नेपालमा कलिलै उमेरमा मुटुरोगबाट पीडित हुनेको संख्या उल्लेख्य बढिरहेको छ ।
मुटुको रोग लाग्ने कुनै एउटा मात्र कारण छैन् । जोखिमका तत्वहरु जस्तै धूमपान, परिवारमा मुटुरोगको इतिहास, उच्च रक्तचाप, उच्च रगत कोलेस्ट्रोल, मधुमेह, मोटोपन, चिन्ता आदिले मुटुरोग लाग्ने सम्भावना बढाउंछ ।
तपाईंलाई आफ्नो नाम, ठेगाना थाहा भएजस्तै आफ्नो कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्राको नम्बर थाहा पाउन जरुरी छ । यही अनुसार खानपान र क्रियाशीलता बढाई आवश्यक परे चिकित्सकलाई भेट्नु पर्दछ । वर्षमा कम्तीमा एकपटक रगत जांच्नुहोस् । यसले कोरोनरी मुटुरोगबाट बच्न या सावधान हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । जोखिमका तत्वहरुलाई समयमा नै ध्यान दिई उचित जीवनशैली अपनाएर मुटुरोगबाट सावधान हुन सकिन्छ । धुमपान, मद्यपान त्याग्ने अनि स्वस्थकर र सन्तुलित आहारले हाम्रो स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
कोलेस्ट्रोलका बारेमा मानिसमा अलि जानकारी कमी भएजस्तो देखिन्छ । साधारण मानिसले यसबारे बुझ्नुपर्ने कुरा के के छन् ?
कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरमा पाइने एक किसिमको बोसो हो । रगतमा धेरै चिल्लो भयो भने यो आर्टरीहरुमा जम्मा भइ रक्त सञ्चार हुन व्यवधान गर्न सक्छ । हामीले खाने खानामा तयारी कोलेस्ट्रोल करिब २० प्रतिशत रहन्छ भने बांकी ८० प्रतिशत शरीरले बनाउंछ । कलेजोले हरेक दिन शरीरलाई पूरै पुग्ने करिब एक ग्राम कोलेस्ट्रोल बनाउंछ । तर हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोलको परिमाणमा परिवर्तन हुन नसक्ने वंशाणुगत प्रभाव पनि पर्छ ।
रक्त कोसिकामा ओहोरदोहोर गर्न कोलेस्ट्रोल मोलिक्यूलहरु आफैंमा लिपिड बोक्ने प्रोटिन या लिपोप्रोटिनसंग आवद्ध हुन्छन् । दुई किसिमको लिपोप्रोटिन मुख्य कोलेस्ट्रोलको वाहक हुन् । तीमध्ये लो डेन्सिटी लिपोप्रोटी (एलडीएल) ले दुई तिहाइ बोक्ने गर्छ । बांकी भएको हाइ डेन्सिटी लिपोप्रोटिन (एचडीएल) संग आवद्ध हुन्छ ।
एलडिएलले कोलेस्ट्रोल कोरोनरी आर्टरीको भित्ताहरुमा जम्मा गर्ने गर्छ र बोसो जम्मा भई मुटु रोग लाग्ने जोखिम बढाउंछ । यसको विपरित एचडीएलले कोलेस्ट्रोल आर्टरीहरुको भित्ताबाट र अझ तन्तुहरु पनि जम्मा पार्छ र कलेजोमा लगी प्रोसेस गरेर शरीरबाट निकाल्छ । त्यसैले एलडीएललाई ‘नराम्रो’ कोलेस्ट्रोल र एचडीएललाई ‘राम्रो’ कोलेस्ट्रोल भनिन्छ ।
हामीले खाने मासु, दुध, घीउ, चीज आदिबाट प्राप्त हुने कोलेस्ट्रोल शरीरलाई आवश्यक पर्दैन तर शुद्ध शाकाहारी खानाबाट अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल प्राप्त हुन्छ । कसैले धेरै परिमाणमा खाना खाए पनि उनीहरुमा रगतको तह साधारण रहन्छ । कोही मानिस धेरै कम खान्छन् तर रगत उच्च कोलेस्ट्रोल हुन्छ । यसको कारण जीवनशैली, वंशाणुगत, लिंग र शरीरले कोलेस्ट्रोललाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने प्रक्रियामा भर पर्छ ।
रगतमा उच्च ग्लुकोज लेभल भएपछि रगत बाक्लो र टांसिने हुनपुग्छ । त्यसैले शरीरभर रगत पम्प गर्न मुटुलाई भार पर्छ र यसले आर्टरीको भित्तामा असर गर्दछ जसले चिल्लो जम्ने क्रमको विकास गर्न सक्छ । मुटु रोगका जोखिमका तत्वहरु धूमपान, उच्च रक्तचाप र रगतमा उच्च कोलेस्ट्रोलबाट हुने नोक्सानलाई मधुमेहले अरु बढाउंछ । टाइप २ मधुमेह भएको मान्छेको प्राय ट्राइग्लिसराइड बढी र एचडिएल कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ । मधुमेह भएको मानिसलाई उच्च रक्तचाप हुने बढि सम्भावना हुन्छ । मधुमेहले मुटुको मांशपेशीलाई असर गर्न सक्छ र रगत पम्प गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । मधुमेहले मुटुको स्नायूलाई असर पार्न सक्छ । त्यसैले एन्जाइनाको लक्षणमा फरक पर्न सक्छ । यसले इन्जाइना र ह्दयाघात पत्ता लगाउन ढिलो हुन सक्छ ।
ह्दयाघातको लक्षणमा खास छातीको बीच भागमा एकदम दुख्ने र छातीमा असुविधा हुन्छ । दुखाई चाहिं एकदम गरुङ्गो या कसिएको हुन्छ जुन दुखाइ पाखुरा, घांटी, गर्धन, पछाडि वा भुंडीमा पनि सर्न सक्छ । यसले घाटी, बंगारा, पाखुरा वा भुंडीमा मात्रै असर गर्न सक्छ । ह्दयाघात भइरहेको मान्छेलाई पसिना आउने, टाउको हलुंगो हुने, वान्ता आउने या श्वास फेर्न गाह्रो हुने पनि हुन्छ । केही मानिस ह्दयाघात हुंदा खाना अपच जस्तो ठानेर झुक्किन्छन् ।
कहिलेकाहिं ह्दयाघात ‘शान्त’ हुन्छ र यसले कम असुविधा महसुस हुन्छ । मधुमेह भएका मानिसमा ह्दयाघातको लक्षण हिप्पोसंग झुक्किने पनि हुनसक्छ । कसैलाई ह्दयाघात भइरहेको छ भने तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पुग्नुपर्छ । धेरै मानिस एम्बुलेन्स बोलाउन कुर्दा या अस्पताल जान ढिलो गरेर जीवन जोखिममा राख्छन् । तसर्थ सम्भव भएसम्म चांडै अस्पताल पुग्नुपर्दछ । ह्दयाघातको अवधिमा जीवन नै जोखिम हुने मुटुका रिदमहरुको विकास हुन सक्छ । त्यसैकारण ह्दयाघातलाई आकष्मिक रुपमा उपचार गरिन्छ ।
ह्दयाघातको उपचार कस्तो छ ? हालै भएको अनुसन्धानमा जिन थेरापीले उपचारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउंछ भन्ने पनि छ । यसबारे बताइदिनु हुन्छ कि ?
तपाईले धेरै मुटुरोगीलाई भेट्नुभएको छ, उनीहरुको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
मुख्यकुरा हामीमा मुटुरोग सम्बन्धि ज्ञानको अभाव पाएको छु मैले । सामान्य रोगबारे लक्षण थाहा नपाउनु या बेवास्ता गर्नु, अस्पताल जान वा अरुलाई भन्न संकोच मान्नु जस्ता समस्या धेरैमा छ । तर, रोग लागिसकेपछि पश्चाताप, भय, एक्लोपन आदि समस्यासंग सामना गरिरहेको पनि देखेको छु । यसमा मैले सक्दो सहयोग गर्ने प्रयास जारी राखेको छु ।
विश्व मुटु दिवसले आम मानिसलाई के सन्देश दिए जस्तो लाग्छ ?
मुटु हाम्रो प्रधान अंग भएकोले यसको हेरविचार सधैं गर्नुपर्छ । मुटुरोग सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञान सबैले मनन गर्नुपर्दछ । समयमा नै सतर्कता अपनाएर मुटुरोगबाट अकालमा ज्यान कसैले पनि गुमाउनु या पीडित हुन नपरोस भन्ने नै यस दिवसको मुख्य सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ ।